बाँकेमा रहेको संसारभरकै ‘दुर्लभ’ एकमात्र जुँगा भएको महादेवको मन्दिरमा शिवरात्रिमाकै दिन घट्यो अचम्मको घटना ! - Nepal Insider
बाँकेमा रहेको संसारभरकै ‘दुर्लभ’ एकमात्र जुँगा भएको महादेवको मन्दिरमा शिवरात्रिमाकै दिन घट्यो अचम्मको घटना !
February 21, 2020 214
बागेश्वरी मन्दिरको पूर्वतर्फ शिव महादेवको मूर्ति छ । शिवरात्रिमा भोलेबाबाले खचाखच भरिने बागेश्वरी मन्दिर परिसरमा यस वर्ष शिवभक्त देखिएनन् । उसो त अन्य समयमा पनि जुँगे महादेवको पूजा अर्चना गर्न बागेश्वरीमा उस्तै भीड हुन्छ । अन्य समयभन्दा शिवरात्रिका दिन भीड बढ्ने गर्छ ।
यस वर्ष शिवरात्रिमा भा’ङ, ध’तुरो र गाँ’जा खान र बेच्न स्थानीय प्रशासनले कडाइ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक वीरबहादुर ओलीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भोलेबाबाको उपस्थिति नहुनुमा यसैको प्रभाव पनि हुनसक्छ ।”
Prevसानेपा काण्ड : विजय चौधरीका बुवाले खोले कार्की परिवारको डरलाग्दो पोल, भन्छन् मेरो छोरालाई अन्याए भयो (भिडियो)
Nextराजिनामा दिएको भोलिपल्टै खुल्यो गोकुल बास्कोटाको अर्को डरलाग्दो पोल !
नेपाल आइडलको शिर्ष ५ बाट बाहिरिए एक नसोंचेको प्रतिस्पर्धी
चिनियाँ दूतावासको ध’म्की आ’पत्तिजनक विषय हो : रविन्द्र मिश्र